Maitiro ekusarudza akakodzera shock absorber (coilover)
1. Tarisa kuti chigadzirwa chinopa 2-3 inch elevation zvinodiwa. Zvimwe zvigadzirwa zvinongopa 2 inches kukwirira. Mushure mekusashandisa zvishoma masendimita matatu kukwirisa, zviri nyore kukwevera kusvika kumagumo mu-off-road uye kukonzera kukuvara.
Chechipiri, kana dhayamita yepakati telescopic tsvimbo yekuvhunduka inopinza inogona kusvika kupfuura 16 mm, inova chiratidzo chesimba.
Chechitatu, ingave iyo yepamusoro uye yakaderera sleeve yekubatanidza yekukatyamadza inosimudza-yakakwirira-simba polyurethane sleeves, inovawo hwaro hwakakosha hwekuva nechokwadi chekushandisa kwenguva refu-yakasimba, nekuti yakajairika rabha yakaoma kushandisa kwenguva yakareba pasi pesimba rakakura. .
Iyo yekuvhundutsa inopinza inonyanya kushandiswa kudzvanya kuvhunduka uye kukanganisa kubva munzira yemugwagwa apo chitubu chinodzoka mushure mekutora kuvhunduka. Kana uchipfuura mumigwagwa isina kuenzana, kunyangwe chitubu chinotyisa chinogona kusefa kuzununguka kwemugwagwa, chitubu pachacho chinodzoreredza, uye chinobata chinovhundutsa chinoshandiswa kudzvanya kusvetuka kwechirimo ichi. Kana iyo shock absorber yakanyanya kupfava, muviri unosvetuka nekudzika. Kana iyo yekuvhundutsa yakanyanya kuoma, ichaunza kushorwa kwakanyanya uye kudzivirira chitubu kushanda zvakanaka. Shi Xiaohui akataura kuti mukugadzirisa sisitimu yekumisa, iyo yakaoma kuvhunduka inopinza inofanirwa kuenderana neyakaoma chitubu, uye kuoma kwechitubu kwakabatana zvakanyanya nehuremu hwemotokari, saka mota dzinorema dzinowanzo shandisa zvakaoma kuvhunduka. Izvo zvinodikanwa kuti ugare uchiedza panguva yekugadziriswa kugadzira iyo yakanakisa musanganiswa wekuvhunduka uye chitubu. Mashopu ekugadziridza ehunyanzvi anogona kuwana yakanakisa mechi kumuridzi wemota.
Kukundikana kwemafuta ekudonha
Kana mota yekuvhundutsa inodonhedza mafuta, hapana mubvunzo kuti chinhu chine njodzi kune chinobata chinovhundutsa. Zvadaro, kana mafuta adonha aonekwa, matanho ekugadzirisa panguva anofanira kutorwa. Izvo zvakakosha zvekuongorora zvinhu mafuta seal gaskets, kuvhara gaskets kuputika uye kukuvara, uye mafuta ekuchengetedza silinda misoro. Tarisa kuti zvikamu izvi zvine nzungu dzisina kusimba here.
Kana kubuda kwemafuta kunowanikwa, tanga wasimbisa cylinder head nut. Kana iyo yekuvhundutsa ichiri kubuda, chisimbiso chemafuta uye gasket inogona kukuvara uye isingashande, uye zvisimbiso zvitsva zvinofanirwa kutsiviwa. Kana kubuda kwemafuta kuchiri kutadza kubviswa, dhonza danda rekunyorovesa. Kana iwe uchinzwa pinch kana kuchinja kwehuremu, tarisa kana mukaha uripakati pepiston necylinder wakakurisa, kana piston yekubatanidza tsvimbo yeshock absorber yakabhenda, uye piston yekubatanidza tsvimbo. pamusoro uye humburumbira.
Kana iyo yekuvhundutsa inopinza isingabvisi mafuta, tarisa kuvhunduka kunobata pini yekubatanidza, tsvimbo yekubatanidza, gomba rekubatanidza, rubber bushing, nezvimwewo zvekukuvadza, desoldering, kuputika kana kudonha. Kana kuongorora kuri pamusoro apa kuri kwakajairika, chinomisikidza chinofanirwa kubviswa zvakare kuti chitarise kana mukaha unofananidzwa pakati pepiston necylinder wakakurisa, ingave cylinder yakadzvanywa, kana vharafu yakavharwa zvakanaka, ingave iyo valve clack nevhavhavha. chigaro chakanyatsobatanidzwa, uye kana chitubu chekuwedzera che vibrator chakapfava kana kuputsika, chinofanira kugadziriswa nekukuya kana kutsiva zvikamu zvinoenderana nemamiriro ezvinhu.
Mukuwedzera, iyo yekuvhundutsa inopinza inogona kunge iine ruzha kutadza mukushandisa chaiko. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuvhunduka Kana zvichikonzerwa nekusakwana kana zvimwe zvikonzero, chikonzero chacho chichawanikwa uye chinogadziriswa.
Mushure mekunge iyo yekuvhundutsa inobatwa ichiongororwa uye yakagadziriswa, bvunzo dzekuita dzinofanirwa kuitwa pane yakakosha bhenji rekuyedza. Kana iyo yekupokana frequency iri 100 ± 1mm, kuramba kwekuwedzera sitiroko uye compression sitiroko inofanira kusangana nezvinodiwa. Kunyanya kupikisa kwekutambanudza kutambanudza ndeye 392 ~ 588N; iyo yakanyanya kupikisa yeDongfeng Motor yekuwedzera sitiroko ndeye 2450 ~ 3038N, uye yakanyanya kupikisa yekumanikidza sitiroko ndeye 490 ~ 686N. Kana pasina mamiriro ekuedzwa, tinogona zvakare kutora nzira yeempirical, kureva kuti, kushandisa simbi yesimbi kupinda nechekumucheto kwechidzitiro chekuvhundutsa, kutsika pamigumo miviri yeshock absorber, uye kubata mhete yekumusoro nezvose. maoko uye woikwevera kumashure uye mberi 2 ~ 4 nguva. Paunenge uchikwevera kumusoro, kupikisa kwakakura, uye kana uchitsikirira pasi, haunzwi kushanda nesimba, uye kudzivisa kutambanudza kunodzorerwa kana kuchienzaniswa neyo isati yagadziriswa, uye hapana pfungwa yekufamba kusina chinhu, iyo inoratidza kuti kuvhunduka kunenge kuri. normal.
Izvo zvikamu zvekuvhundutsa zvinotora zvakakosha zvakanyanya, kunyanya iyo seal seal brand, Max Auto shandisa NOK brand oil seal, piston rod is chrome plating, kuti ive nechokwadi chekuti inodzivirira kubva kune ngura.
Sintered ndeyechokwadi chakanyanya kuti ive nechokwadi chekunyorovesa simba kugadzikana.
Warranty: kune ese anobata zvekuvhundutsa, coilover inotengeswa naMax Auto, kana paine chero dambudziko remafuta anodonha mukati megore rimwe, isu tinopa iyo yekutsiva yekuvhundutsa muviri mahara.
Pane mutengi mumwe akaita kuenzanisa bvunzo neMax Auto brand uye Taiwan brand, mhedzisiro inoratidza mhando yeMax Auto mhando iri nani.
Nguva yekutumira: Nov-11-2021